ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “မြန်မာတွေ စိတ်မရှည်တဲ့ နေရာ”
လေယာဉ်ပျံပေါ်မှာကော အတူတူပါပဲ..ကွင်းထဲရောက်လို့ လေယာဉ်တံခါး မပွင့်သေးဘူး၊ ခရီးသည်တွေ isle ထဲအတင်းထွက်၊ ပစ္စည်းတွေ အတင်းချ လုပ်ကြတာ မြန်မာတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး..၊ အာရှသား အများစုလည်း ဒီလိုပြုမူလေ့ ရှိတတ်ကြပါတယ်..။
နိုင်ငံတကာကလူတွေ သွားသုတ်သုတ် လာသုတ်သုတ် လုပ်တာ စိတ်မရှည်လို့ ဟုတ်ဟန်မတူပါဘူး။ အချိန်ကို ချွေတာတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့စိတ်ရှည်တဲ့ နေရာမှာ မြန်မာတွေထက် ပိုသာတာကို ကျမအခုမှ လက်တွေ့ တွေ့မြင်နေရတယ်။
ဥပမာပြောရရင် ... မြန်မာပြည်မှာတုန်းက လမ်းကူးတဲ့အခါ လူကူးမျဉ်းကျားမှာ ဘယ်လောက်ကြာအောင် စောင့်စောင့် ကားတွေက ရပ်မပေးဘူး။ ကားရှင်းမှ လူက ကူးရတယ်။ ဒီမှာတော့ လူကူးမျဉ်းကျားပေါ် ခြေချလိုက်တာနဲ့ ကားတွေက အလိုလို ရပ်ပေးပြီးသားပဲ။
နောက်ပြီး ဒီကလူတွေက ဘယ်လောက် တန်းစီရ စီရ စိတ်ရှည်ရှည်စီကြတယ်။ ကြားခိုးမဖြတ်ဘူး။ ဘတ်စ်ကားပေါ် လုမတက်ဘူး။ (အဲဒါကတော့ demand နဲ့ supply မျှတနေလို့ထင်ပါတယ်)
ပြီးတော့ တယောက်နဲ့ တယောက်ဦးစားပေးကြတယ်။ ဦးစားပေးခံရသူကလည်း ဦးစားပေးသူကို တလေးတစား အသိအမှတ်ပြုတယ်။
ရန်ကုန်မှာတုန်းက မော်တော်ကားရဲ့ မီးကြီးကို တောက်ပြရင် အဲဒီကားက အရေးပေါ်ဖြစ်နေတယ်။ သူ့ကို သူများကဦးစားပေးရမယ်ဆိုတဲ့ သင်္ကေတလို့ မှတ်ထားတာ။ အခုတော့ မီးကြီးတောက်ပြတာက တဘက်ကား (သို့) လူကို သွားခွင့်ပေးတာတဲ့။
ဒီက တချို့ဟိုမရောက် ဒီမရောက် လူအနည်းစုနဲ့ သောက်စားမူးယစ်ထားသူ တချို့ကလွဲလို့ တော်တော်များများက စိတ်ရှည်ကြ သည်းခံကြတယ်။ အမြဲတမ်း လုပ်နေကျဖြစ်သွားတော့ အကျင့်ပါနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒါတွေ တွေ့ရတော့ ကျမမှာ အားမလို အားမရ ဖြစ်မိပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံက အများစု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပြီး စိတ်မရှည်ကြ သည်းမခံကြတာများနေတာ မြင်လို့ပါ။
(ဟို ... မနိုင်လို့ သည်းခံရသည်က တပိုင်းပေါ့လေ။)
နေထိုင်ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မပြေလည်တဲ့ဘ၀တွေ၊ အခက်အခဲတွေကြောင့် အဲဒီလိုတွေ ဖြစ်သွားတာပဲ နေမှာပါလို့ ...။
လွှတ်ချိန်ဆို ဘတ်စ်ကားက သိတ်ကျပ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် တကားလုံးကြည့်ခဲ့ ပြီးပြီပဲလေ ဆိုပြီး ရင်နာနာနဲ့ စောထွက်ခဲ့ကြရတာပါ။
အရာရာတိုင်းမှာ demand နဲ့ supply မျှတနေရင် အားလုံး စိတ်ရှည်မှာပါ
အဲဒါတော့ အရမ်းမှန်တာပဲ ကိုကြီးပေါရဲ့။ ဖြူတုတ်တောင်မှ ဟိုတနေ့က နှင်းဆီရင်ခွင်အငြိမ့်ကို ကြည့်ပြီး ပြောနေသေးတယ်။ ပွဲတောင်မဆုံးသေးဘူး အသီးသီးထပြန်ကြတာတော့ အရမ်းစိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စရာကောင်းတာပဲ။ ကိုယ့်အတွက်တင် မကပါဘူး။ ဖျော်ဖြေသူ အတွက်ရောပါ။ Live Performance ဆိုရင်လေ။
ဟုတ်ပ ကိုပေါပြောမှ သတိထားမိတယ်
အင်း တိုက်ဆိုင်တာလားတော့ မသိဘူး။ မနေ့ည ကားလမ်းကိုိ လူကူးမျဉ်းကျားကဖြတ်အကူးမှာ ချိန်းထားတဲ့ သူငယ်ချင်းဆီက ဖုန်းလာရော၊ အဲဒီမှာ ကားတစီးကလည်းအလာ ကားပေါ်က ဒရိုင်ဘာ က မျက်စောင်းထိုးတာ ကြောက်စရာကြီး၊ သူ့ကို ကြည့်လိုက်တော့ ပုံစံက အသားညိုညို၊ ဆံပင်လိမ်တွန့်နဲ့ မျက်မှန် နဲ့၊ အညာသား မြို့ ရောက်လာတဲ့ ပုံဆိုတော့ ဘရားဘရား ကိုပေါများလား။
Maydarwii…. စိတ်ရှည်တယ်ဆိုတာထက် စည်းကမ်းနဲ့ ပိုဆိုင်မလားမသိဘူးနော်။ မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီ ကျူစနစ်မရှိတာ၊ လမ်းစည်းကမ်း၊ လူစည်းကမ်း မလိုက်နာတာတွေကလည်း တော်တော်လေး စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်။ အဲဒီအကြောင်း ပို့စ်တပုဒ်လောက် ရေးဦးမှပဲ။
Anonymous…. ဘတ်စ်ကားကတော့ တချိန်လုံး ကြပ်နေတာပါပဲလေ။
ဖြူတုတ်လေး၊ ခရေညို…… Live ဆိုရင် စင်ပေါ်ကလူလည်း ဖီးလ်ငုပ်မှာပေါ့။
Htun… အမယ်မင်း…. ရေးပုံကတော့ ရက်စက်ပါ့ ထွန်းရယ်။ အညာသား မြို့ရောက်လာတဲ့ ပုံတဲ့။ ဒီလောက် ကြည့်ကောင်းတဲ့ ညိုချောလေးကိုများ။ လုပ်ရက်လိုက်တာ။ အေးလေ။ ကားရှိတယ် အထင်ခံရလည်း နည်းတာမှတ်လို့။ အသာငြိမ်နေလိုက်မှ… ဟီး။
So many wise men & women alot here...
They really think that they are so smart and better idea than others' ordinary people..
keep up and go ahead...your tooo talented idea...
အွန်လိုင်းမှာလည်း ဘလော့ပို့စ်တွေ ဖတ်ရင်းနဲ့ ပို့စ်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို သေချာမဖတ်ပဲ ပုဂ္ဂိုလ် စွဲတွေနဲ့ ထင်ရင်မြင်ရာ ရမ်းသမ်းဆဲဆိုကြတာတွေ ...အဟေ့ဟေ့ ဟေ
စိတ်မရှည်တဲ့နေရာဆိုလို့ ကိုယ့်အတွေးနဲု့ကိုယ်လာလိုက်တာလွဲသွားတယ်။ ..။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်အဲဒီနောက်ဆုံးခန်း သီချင်းကမှ နားထောင်လို့ကောင်းတယ်။ ။ ။ ရုံထဲ မှာကိုယ့်ဘေးက လူက ပေါက်ပေါက် မုန့်စားတာလောက် မုန်းတာမှမှရှိ. ညှော်တယ်။ .လမ်းဖြတ်ကူးရင်လဲကားရှင်းအောင်စောင့်ပါတယ်။
ဒါဆို ကျွန်မကတော့ စိတ်ရှည်တဲ့အထဲပါနေပြီကိုပေါရေ… ၀တ္ထုဖတ်ရင်လဲ နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သလဲ ဘယ်တော့မှ ကြိုမသိချင်ဘူး… ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်လဲ ကြည့်ပြီးသားသူက ဇာတ်လမ်းလာပြောတာ မကြိုက်ဘူး… နောက်ဆုံးခန်းကို အမြဲ စိတ်ရှည်ရှည်စောင့်ကြည့်တတ်တယ်…
တန်ခူးနဲ့ တို့နဲ့တူတယ် ... ၀တ္ထုဖတ်ရင် ဇာတ်လမ်းကြိုသိနေမှတော့ ဘယ်မှာလဲ အရသာ ... နော ... ကိုယ့်အိမ်ကလူကတော့ ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်ဖြစ် ၀တ္ထု ဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးကို အရင်ကြည့်တယ်ဗျား ... ပြီးရင် ဇာတ်ကြောင်း လာမပြောနွှဲ လို့ ပိတ်ထားရတယ်။
စလုံးတွေ စိတ်မြန်တာ ... ကိုယ့် ဘော့စ်နဲ့ လက်တွေ့။ ကြာစူးလို့လဲခေါ်တယ်။ ဟိုတလောက ဘာတန်ဘက် အလုပ်ကိစနဲ့ နဲ့သွားတာ ... အပြန်လဲကျရောဗျာ ... သင်္ဘောရောက်ဖို့ ၁၅မိနစ်လောက်အလိုကတည်းက အပြင်ဘက်ထွက်ပြီး ဆင်းဘို့စောင့်နေတာ ... ကိုယ်ကလဲ တစ်ခါမှ မရောက်ဘူးတော့ အော်ရောက်တော့မှာပဲဆို သူနဲ့ အတူလိုက်ဆင်းတာ ... ရောက်နိူးရောက်နိူးနဲ့ အောင်မြက်လေး ၁၅ မိနစ်လောက် လေတိုက်ကြီးထဲမှာ မက်တပ်ကြီးရပ်ပြီး စောင့်နေရတယ်။ အထဲမှာ အေးဆေး ထိုင်နေရင်ရရက်နဲ့။ သင်္ဘောလဲ ကမ်းကပ်ရော သူက ဟိုးရှေ့ဆုံးမှာ ပထမဆုံးထွက်ဖို့ တန်းစီနေတာ ... သူ့ဘေးမှာလဲ တစ်ခြားခလေးတွေနဲ့ တန်းအပြိုင်စီလို့ ... ရီလဲရီချင်တယ် ...
ကိုပေါ ဖတ်လို့အတော်ကောင်းတယ်၊ ကိုပေါစာတွေ အားပေးနေသူပါ၊ ဒါပေမယ့် လည်း စင်္ကာပူ ကို မနေဖူး မရောက်ဖူး တော့ စင်္ကာပူ သား စိတ် မြန်လက်မြန်
ဆိုတာ တကယ် မသိပါဘူး၊ ကော်မန့် အားလုံး က လည်း စင်္ကာပူ သား ( ရွှေ ) များ ဖြစ်နေတာကြောင့် အတိုင်အဖောက်ညီညီ ဝေဖန်ထောက်ပြသွားတာ ကို လဲ
တစ်စုတစ်စည်း ဖတ် ရလို့ဗဟုသုတ တော့ ရပါတယ်၊ ကိုပေါပြောသလို ပဲ ကျွန်းပိစိလေး နေကြရတော့ လုပ်စရာ အလုပ် အကိုင် ကြောင့် စည်းကမ်း တခု ကြောင့်
သို့ မဟုတ် အတင်းအကျပ်လိုက်နာစေတာ တွေ ကြောင့် လည်းပဲ လူတွေဟာ စင်္ကာပူ မှာ စက်ရုပ်လို နေကြရတာ ကို သိခွင့် ရလို့စိတ်မကောင်းပါဗျာ၊
အကယ် ၍ တခြား ကမBာ့ နိုင်ငံ တွေ က ရွှေတွေ လာဖတ်ယင်တော့ လည်း ဖတ်ရတာ ရှတတ ကြီး ဖြစ်မှာ သေချာတယ်၊ ကမBာအနှံ့က ရွှေတွေ က ဘာဝေဖန်ချက်ပေး ရမလဲ ဆိုတာ အတော်ခက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အားလုံး စလည်ဆုံး က လဲ စလုံး ဖြစ်ဖြစ်နေလို့ ပါဗျာ၊
ကိုပေါ ရေ တကယ်တော့ ကိုရွှေ တွေ ရုပ်ရှင်မပြီး ခင် ထပြန်တာ စိတ်မရှည်တာ မဟုတ်ဘူးဗျ၊ ရွှေဘ နိုင်မယ်။ ရဲကားလာမယ် ဆို တဲ့ဖော်မြူလာ ကြောင့် အချိန်
ပို မဖြုန်းချင်တော့ လို့ထပြန်တာ လို့ပဲ အနီးစပ်ဆုံး ရမ်းတုတ် မှန်းတုတ် ရေးသား ဝေဖန်မိပါတယ်ဗျာ။
ကိုပေါရေ ဝမ်းသာပေတော့၊ ကိုပေါ ရေးရေးနေတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား မပြောင်းရေး စာတွေကို အမ်အမ်လီး များ ဖတ်မိလေသလား မသိပေဘူး။ အခု ပီအာကျဖို့ တော်တော်ကို ခက်သွားပြီ။ ပီအာ သက်တန်းတိုးတာမှာ၊ နိုင်ငံသားလျှောက်တာတွေမှာလည်း အပယ်ခံရတာတွေ ကြားလာရပြီ။ အက်စ်ပတ်တွေ ဘာတွေကလည်း မပြောနဲ့ဗျို့ ဂျက်-ဂျက်-ဂျက် နဲ့နေတာပဲ။ ဂျက် ၄ လုံးတောင် ဖြစ်တော့မယ်။ နောက် နှစ်နည်းနည်းကြာရင် အရင် ပီအာ ငမိုက်သားတွေလည်း နိုင်ငံသား ပြောင်းသွား။ နောက်ထပ်လည်း ထပ်မကျနဲ့ ဆိုရင်၊ ကိုပေါတို့လို ပီအာစစ်စစ် ဆိုတာ ရွှေထက်ရှားသွားမယ်ဗျို့။
well done, nga paw.. u didagood job for SPDC... well done..
SPDC shld give u the best medals..
ကျနော်လဲ ဒီမရောက်ခင် ရုပ်ရှင်တွေကို စဉ်ဆက်မပြတ်ကြည့်ခဲ့ဘူးပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော့် ချစ်ချစ်လေးက ရုပ်ရှင်သရဲလေးကိုဗျ (ဟီးကြော်ငြာဝင်တာ)
(၂) မိမိရုပ်ရှင်လာကြည့်သိကို အသိများတွေ့သွားမည်စိုးရိမ်ခြင်း
(၃) မြန်မာပြည်၏ ရုပ်ရှင်ရုံအများစုပုံစံအရ အပြန်တံခါးပေါက်များမှာလွန်စွာသေးသဖြင့်မတိုးဝှေ့လိုခြင်း
(၄) မပြန်ခင်ရှုရှူး ပေါက်သောအခါတွင်တန်းမစီလိုခြင်း
(၅) ရုပ်ရှင်ရုံမှလည်း ကားမပြီးခင်မီးများထွန်းခြင်း
(၆) အဓိကအချက်မှာ မြန်မာကားများ၏ ဇာတ်သိမ်းခန်းမှာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး အများအားဖြင့် ထပ်တူညီနေခြင်း
ဘတ်စ်ကားနဲ့ ရှူရှူးပေါက်ခြင်းပြသနာက ပိုအဓိကကျလေမလားလို့
ကိုပေါက ရုပ်ရှင်နောက်ဆုံး ပြီးခါနီး စိတ်မရှည်တာကိုပဲ သတိထားမိတာကိုး။ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျ။ ရုပ်ရှင်မပြခင် နိုင်ငံတော် အလံနဲ့ သီချင်းဖွင့်ရင်လည်း ဘယ်တော့မှ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ပြီးတဲ့အထိ မတ်တပ်မရပ်ကြဘူးဗျ။ မကောင်းတတ်လို့ တစ်ချက်တော့ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး ချက်ချင်းလိုလို ပြန်ထိုင်ကြတယ်လေ။ အဲဒီနေရာမှာလည်း မြန်မာတွေ စိတ်မရှည်ကြဘူးဗျ။